Mara mma Ọnọdụ ileta na Austria Na Italy Site Okporo ígwè | Save A Train
Home > Travel Europe > Mara mma Ọnọdụ ileta na Austria Na Italy Site Okporo ígwè
(Emelitere ikpeazụ On: 24/07/2020)
Na ọtụtụ elu profaịlụ, ọtụtụ mba ndị dị ka France, Germany, na Switzerland, sịkwa Austria bụghị e na-dị ka ukwuu anya! Ọ dị mma, Italy mgbe n'ezie na dara apụ map, ma ụgbọ okporo ụzọ si Austria ka Italy n'aka e leghaara anya. ma, na nke ahụ bụ banyere ịgbanwe! Austria na Italy site okporo ígwè na-otu n'ime ndị kasị ịtụnanya ahụmahụ ị ga-ebi ga-esi na-agba àmà.
Na ha quaint ugwu obodo nta, mesmerizing eke nkiri na ebube obodo ije, ị ga-esi ihe dị ịtụnanya Europe tour. Trains in Austria are among kacha elu niile nke Europe, n'abalị ụgbọ oloko na-na n'elu udi (N'agbanyeghị, n'abalị ụgbọ oloko nwere niile ahụ ụzọ gasị dị ka ụbọchị ụgbọ oloko eme), ọtụtụ na-adịghị na-achọ elu abụọ na ndị incredibly ala!
Ya mere, Unu chere ọ bụla ogologo: ịmalite ịgagharị Austria na Italy site okporo ígwè site na ịga na ndị a mara mma n'obodo:
Malite gị Austria na Italy site okporo ígwè njem na Vienna
Malite gị Austria na Italy site okporo ígwè mkpali site apụ Austria dị ebube isi obodo mbụ. Vienna oozes akụkọ ihe mere eme, amara na-apụghị ịkọwa mma!
-Efu Nrịrọ elu Austria nke ngosi ihe mgbe ochie na a ụbọchị, agbalị omenala Vienna kọfị na Sachertorte na ga ịfụ uche gị! Lelee Vienna bụ nile na-ọkacha mmasị ka Vienna State Opera na Schonbrunn Obí (ha kpam kpam ga-ahụ!). Dabere na ụgbọ okporo ígwè na-aga na ị chọrọ iri, ma na-aga Salzburg na Hallstatt ogologo ma ọ bụ isi kwupụta Graz.
Ebe ọ bụ na Vienna-Graz nwere a kpọmkwem okporo ígwè akara, akwụsị Graz na Klagenfurt na ụzọ gị site na Vienna na Venice. Ahapụla Graz enweghị ịga na Schlossberg. Nke a bụ a ugwu nke dị n'etiti obodo mara maka ya ma ama elekere elu na a ebe e wusiri ike. Y’oburu na inwere ezigbo udi, rịgota akwa mgbago site na Schlossbergplatz ma ọ bụ jiri naanị ebuli ahụ. Dị nnọọ na-esote Schlossbergplatz bụ akụkọ ihe mere eme Kastner und Ohler Ịzụ ahịa etiti - lelee cafe elu ụlọ ha.
Na ụzọ gị na- ebe, na-eje ije n'okporo ámá nke center na-agbalị onye nke kasị mma ice-creams mgbe! “ice Geissler” na Sporgasse arụpụta organic ice ude na-abịa na-apụghị ịgụta ọnụ flavors na bụ ibu na-atọ ụtọ! Your Austria na Italy site okporo ígwè njem na-na-achọ site nkeji, ọ bụghị ya?
Vienna na Graz Ụgbọ oloko
Our next stop in Austria and Italy By Rail is Venice, Ozugbo ị na-eru Italy, ị banyere n'ala nke gorgeousness! Ulo na Venice bụ nnọọ oké ọnụ, ya mere, ọ na-arụ ọrụ gị amara ma ọ bụrụ na ị na-na-anọ nanị otu ụbọchị. Unu gị n'iyi oge ma mee ihe dị ukwuu dị ka o kwere na nke a mkpirikpi. A gondola ụgbọ mmiri njem bụ kwesịrị! FYI, ọ dịkwa nnọọ oké ọnụ. Na-atụ anya na-akwụ banyere 80 EUR maka a 30-nkeji gondola tour na banyere 120 EUR maka a 45 nkeji otu. mgbe, aga lelee Ponte di Rialto - otu n'ime ndị kasị ama àkwà mmiri na Venice. Ọ jikọrọ abụọ abụọ na-Grand Canal, na na ọ bụ nso Ponte di Rialto. Na ụzọ gị na ụgbọ okporo ígwè, Akara na stunningly mara mma Piazza San Marco, aka Saint Mak Square.
Bolzano na Venice Ụgbọ oloko
Vienna na Venice Ụgbọ oloko
Udine na Venice Ụgbọ oloko
Na-agwụ gị Austria na Italy Site Okporo ígwè na Florence
On gị Austria na Italy site okporo ígwè tour, ị ga-yiri ka akwụsị Florence. A ụbọchị ma ọ bụ abụọ na obodo a juru na akụkọ ihe mere eme, nkà na okpukpe dị ọcha anwansi. Ihe mbụ nile ịhụ na-The nnukwu ụlọ ụka Senti na Cloisters nke Santa Maria Novella. Ha na-ebube na nso ọdụ ụgbọ okporo ígwè! E nwekwara a mara mma Piazza e na fọrọ mgbe niile jupụta na mmadụ. mgbe, akpali n'elu ebube Santa Maria del Fiore na ya nnukwu dome. Lelee nnukwu ụlọ ụka Senti nke Santa Croce na nnukwu ụlọ ụka Senti di San Lorenzo na Medici ụlọ ekpere nakwa.
Were ezumike Site na Austria na Bytali Site na ilgagharị na na isi na San Lorenzo Market maka a ngwa ngwa na na-atọ ụtọ nri! Nke a ahịa bụ obodo 'ebe kasị masị ịzụ ahịa na nri! Ya mere, ma eleghị anya ịzụta onye a ncheta mgbe ị ga-enwe mmasị gị nri ehihie? Ee! Ahapụla Florence enweghị ịga na Uffizi, na Accademia, na Palazzo Vecchio, na Pitti Obí. Ndị a bụ ndị isi ngosi ihe mgbe ochie n'obodo. Ọzọkwa, ịkwụ ụgwọ a gara n'akụkụ Boboli Gardens, ndị kasị mma ubi ị ga-ahụ.
Gị ọzọ akwụsị bụ Rome. Ọfọn, ị maara ihe na-eme n'ebe ... na ọ bụrụ na ị na-elele anyị Italy Pinterest mbadamba.
Bologna na Florence Ụgbọ oloko
Livorno na Florence Ụgbọ oloko
Ravenna na Florence Ụgbọ oloko
N'ihi na ndị kasị ịtụnanya Austria na Italy site okporo ígwè ahụmahụ, Login to Zọpụta A ụgbọ okporo maka quickest na kasị mmefu ego-enyi na enyi ụzọ gị gbaa ụgbọ okporo ígwè!
Ị chọrọ Embed anyị blog post gị na saịtị, wee pịa ebe a: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/cities-austria-italy-rail/ - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#travelaustria Train Travel ụgbọ okporo ígwè njem travelaustria travelitaly